မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 05/01/2008 - 06/01/2008
မဗေဒါရဲ့ depression ကတော့ ၅၂ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့.. သင်တို့ရော စမ်းကြည့်ချင်သေးလား...
Posted by mabaydar at 6:43 PM 1 comment :
ဒီပိုစ့်လေးကို... ကိုပီကေဘလော့မှာ ကျွန်တော်နဲ့ဘလော့ဆိုတာကို ဖတ်တုံးက tag ခံရဖူးပါတယ်။
ဖတ်တဲ့သူတိုင်းကို tag ထားတာပါ။ ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျမကကျမဘလော့မှာကျမအာရုံလာရာ randomly ရှောက်ရေးတတ်ပါတယ်။
ခုတော့ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို ရေးဖို့အာရုံလာပါပြီ.....ဟတ်...ဟတ်....
အာရုံလာရတဲ့အကြောင်းကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး.... ကျမဘလော့ရဲ့ခေါင်းစဉ်.. "မဗေဒါရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်" ဆိုတာနဲ့ပတ်သတ်နေလို့ပါ...
ဘလော့ဆိုတာကို သိတာတော့ကြာပါပြီ... ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲနေခဲ့ပါတယ်.. ဖတ်လဲမဖတ်ဖြစ်ပါဘူး..
အဲဒိတုန်းကလဲ ဘလော့ဆိုတာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မှ သိပ်မရှိသေးတာ..
၂ဝဝ၆ နိုဝင်ဘာလလောက်တုန်းက အတန်အသင့်ခင်တဲ့ အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ စကားပြောရင်း သူကဘလော့အကောင့်ဖွင့်ခိုင်းပါတယ်..
ဘလော့ကမိုက်တယ်.. ဆန်းကြည့်ဆိုပြီးပြောလို့.. အကောင့်သွားဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... ကိုယ်ပိုင် page လှလှလေးတစ်ခုနဲ့..
ဒိုင်ယာရီလိုရေးလို့ရလို့သဘောကျပေမဲ့... ဘာရေးရမှန်းမသိပါဘူး.. တကယ်ပါ.. အဲဒိတုန်းက မြန်မာလိုရေးတဲ့ဘလော့တွေကိုလဲ မမြင်ဘူးခဲ့သလို..
တွေးတောင်မတွေးမိပါဘူး.. ဒီလိုနဲ့အလုပ်ထဲမှာအားနေတာရော... စိတ်ညစ်တာရော၂ခုဆုံသွားတာနဲ့... "whataboring day" ဆိုတဲ့ပိုစ့်တစ်ခုနဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်လေးရခဲ့ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့အဲဒိနောက်ပိုင်းမအားတာရော.... ကိစ္စတော်တော်များများရှုပ်သွားတာရော.. အစထဲက စာရေးစာဖတ် အလွန်တရာမှပျင်းတာရောကြောင့်... ဘာမှဆက်မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး..
မရေးတတ်တာတောင် ကျမ background wallpaper , tamplates တွေကိုကြိုးစားပြီးပြောင်းကြည့်ပါသေးတယ်.. CSS, HTML တွေကိုလဲလုံးဝနားမလည်လေတော့..
စိတ်ရှုပ်တာပဲအဖတ်တင်ခဲ့ပါတယ်... နောက်ပိုင်းပြစ်ထားလိုက်တာ password တောင်မေ့တဲ့အထိပါပဲ... ခုထိလဲကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်သေးပါဘူး..
ဒီလိုနဲ့ကျမရဲ့ဘလော့လေး ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက် စတင်မွေးဖွားရှင်သန် ခဲ့ပါတယ်...
၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းဖြစ်တုန်းက ကိုထိုက် ရဲ့ဘလော့ကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးလာပါတယ်.. အဲဒိမှာ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေ.. ဓာတ်ပုံတွေဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...
အဲဒိကတဆင့် လင်းလက်ကြယ်စင်ဘလော့ကိုလဲ ပုံမှန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်.. မြန်မာဘလော့တွေကို ဖတ်ရတော့ တော်တော်လေးကို ဖတ်လို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်..
အဲဒိဘလော့တွေကတဆင့် တခြားဘလော့တွေဆီကိုပါ ကျမခြေဆန့်ခဲ့ပါတယ်.. အိုင်ဒီယာတွေ.. အကျိုးပြုတွေ.. ရသတွေ.. ဒါတွေအားလုံးဟာ ဝါသနာရှင်တွေက ရေးထားတာပါ..
ကျမမှာလဲဒီလိုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့တွေးမိတယ်.. ကျမပြစ်ထားမိတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းမှာ ဘလော့လောကကြီး ဒီလောက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဆိုတာ..
"Alice in the wonder land" ရောက်နေသလို.. ယောင်လည်လည်နဲ့အံ့မခန်းပါပဲ....
နောက်တော့လင်းလက်ကြယ်စင်ဘလော့ ဘေးက မြန်မာဘလော့လုပ်ချင်ရင်ဆိုတဲ့လင့်လေးကနေ..
ကိုမောင်လှ.. ကိုညီလင်းဆက်.. တို့ဘလော့မှာသွားလေ့လာခဲ့ပါတယ်..
မြန်မာစာလုံးလေး ဘလော့ပေါ်မှာ မြင်ရဖို့တောင် တော်တော်လေးကြိုးစားလုပ်ယူခဲ့ရတယ်..
နောက်ဆုံး သိချင်သမျှကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တနေရာထဲမှာရနိုင်တဲ့ ကိုရန်အောင်ရဲ့ " မြန်မာဘလော့ဂါ helpdesk" ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ရတနာသိုက်တွေ့လိုက်ရသလိုပါပဲ..
မသိတာရှိရင်လဲ Cbox မှာမေးခဲ့လို့ရသေးတယ်.. တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်...
မဗေဒါရဲ့ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း...............
ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့.. ရှင်းပါတယ်.. မဗေဒါ သိတ်ဟန်မဆောင်တတ်ပါဘူး.. အထူးသဖြင့် ကြည့်မရတဲ့သူ.. မုန်တဲ့သူတွေဆိုရင်ပိုဆိုးပါတယ်..
ဟန်ဆောင်ပြုံးပြရမှာတောင်ဝန်လေးတတ်သူပါ.. ခုအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ တော်တော်လေးအားနည်းနေတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေ့ရတယ်..
ပြီးတော့ကိုယ့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကလိမ်နေတာသိရင်လဲ မပြောပဲမနေနိုင်ဘူး.. မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းချင်တဲ့ လူမိုက်အလုပ်မျိုးသိပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီတော့ကာ စစချင်း မဗေဒါဘလော့ကို ရေးမယ်ဆိုတုံးက စိတ်ကူးထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုတော့..... အပြင်လောကမှာ မဗေဒါ မကျေနပ်သမျှတွေ.. မကျေနပ်တဲ့သူတွေအကြောင်းတွေ.. ကိုယ်ကခင်သလောက် ကိုယ့်အပေါ်ပြန်မကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ.. သစ္စာမရှိတဲ့ ချစ်သူအကြောင်းတွေ.. စသည်ဖြင့်
မဗေဒါ မကျေနပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကို ဒီပေါ်မှာပေါက်ကွဲမယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပါ.. ဘလော့လောကမှာ ဒီလိုသူငယ်ချင်းတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာ အဲဒိတုန်းကမသိသေးဘူးလေ...
မဗေဒါနဲ့ အပြင်မှာသိတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးကို မပြောပြပဲနေမယ်ပေါ့.. အဲဒါကြောင့်လဲ "မဗေဒါရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်" လို့ အမည်လေးကို ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်..
ဒါပေမဲ့ မဗေဒါ ခုတော့ ရည်ရွယ်ချက်နဲနဲပြောင်းလာပြီ.. ဘလော့ရေးတော့ သူများတွေလာဖတ်ကြတယ်.. ကွန်မန့်လေးတွေ ဆီပုံးက မတ်စေ့ခ်ျလေးတွေ မြင်ရင်ပျော်တယ်..
ကိုယ့်ဘလော့လေးကို လာလည်တဲ့သူတွေကို မဗေဒါ့ မကျေနပ်ချက်တွေတင် မကပဲ.. သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖတ်သွားလို့ရအောင်.. မဗေဒါလဲ ရေးရတာဝါသနာပါတဲ့.. ပိုစ့်မျိုးလေးတွေ ရေးဖြစ်လာတယ်.. စာလာဖတ်တဲ့သူတွေကို တစ်ခုခုတော့ပေးချင်တယ်.. တသက်နဲ့တကိုယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်မထင်ထားတဲ့ ဝတ္တုရေးခြင်းဆိုတာကိုလဲ ခုမှစလုပ်ဖြစ်တယ်.. အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် မဗေဒါ ဝတ္တု ၁အုပ်ကို အစအဆုံးတစ်ခါမှမဖတ်ဖူးဘူး.. အထူးသဖြင့် ဖေဖေက ငယ်ငယ်ထဲကတားမြစ်ထားတဲ့ အချစ်ဝတ္တုတွေဆို လုံးဝ မဖတ်ဖူးဘူး.. တစ်ခါတစ်လေတော့ မဂ္ဂဇင်းထဲက ဝတ္တုတိုလေးတွေ ရုပ်ပြကာတွန်းတွေနဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ စုံထောက်ဝတ္တုတွေ နဲနဲကြီးလာတော့ ဖေမြင့်စာအုပ်တွေပဲ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်.. စာဖတ်ခြင်းဆိုတာကို ဝါသနာမပါပင်မဲ့ အမုန်းကြီးလဲမဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ့်ကို တကယ်စွဲဆောင်ပြီးရေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ တကယ်သေချာဖတ်ပါတယ်.. ဖတ်ပြီးရင်လဲ ထပ်ခါထပ်ခါပြန်တွေးပါတယ်..
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို မဗေဒါဟာ စာဖတ်အားနည်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားအယွင်းရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်... အရေးအသားညံ့နေသေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်...
စာဖတ်သူအားလုံးဗွေမယူကြပါစေလိုကြောင်း ကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါရစေ... ပိုကောင်းလာနိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားသွားမှာပါ...
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း... မဗေဒါ အပြင်မှာမကျေနပ်ချက်တွေကို အိတ်သွန်ပါမယ်ဆိုမှ... အရင်ဆုံး အိမ်မှာဘလော့ရေးတော့.. မိသားစုကစပြီးသိပါတယ်..
နောက် အရင်ကတော့ ရည်းစားကိုတော့ ဘာမှမဖုံးထားချင်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်.. (မှတ်ချက်.. ခုတော့ ထိုရည်းစားမရှိတော့ပါ..) နောက်တော့.. ဘယ်လိုကဘယ်လို အရင်အလုပ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အကိုကြီးက တွေ့သွားလဲမသိပါဘူး... သူကနေတဆင့် အရင်အလုပ်ကသူငယ်ချင်းတွေသိသွားပါတယ်..
အခုအလုပ်မှာလဲ အလုပ်ကနေပိုစ့်ရေးရင် တွေ့ကြတော့ သူတို့လဲသိသွားပါတယ်.. အပြင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလဲ သူ့ဘာသူမျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး ကျမဘလော့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြန်တယ်.. ခက်တာကလဲ ဒီဘလော့ account လေးကိုဖွင့်ခါစက တစ်ခြားနေရာတွေမှာလဲ သုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့.. ဒီမဗေဒါဆိုတဲ့နစ်လေးကို အပြင်သူငယ်ချင်းတော်တော်များများက ကျမမှန်းသိပါတယ်.. ဒီတော့.. "မဗေဒါရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်" ဘလော့လေးက လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်တော့ပါဘူး..
ခုဆို မဗေဒါ စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်တာရှိရင်တောင် ရေးချလို့မဖြစ်တော့ပါဘူး... ခုတလော "မဗေဒါရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်" ကို နာမည်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်..
လျှို့ဝှက်လို့လဲ မရတော့ဘူးဆိုတာသိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ဒိထက်ကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လဲ ခေါင်းထဲပေါ်မလာသေးပါဘူး..
ဒီတော့ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုပဲ ဆက်လက်သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း... သို့သော် မဗေဒါရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်စစ်စစ်များမဟုတ်ကြောင်း...
Posted by mabaydar at 7:25 PM5comments :
Posted by mabaydar at 6:13 PM9comments :
"မေမေရေ.. သမီးဒီလုံချည်လေး ဒီနေ့ဝတ်မယ်နော်... ခဏငှား..."
"အော်.. ဒီကောင်မလေးနဲ့.. အမြဲတမ်းရှက်ပြာ ရှက်ပြာနဲ့.. လုံချည်မဝတ်စဖူး ဝတ်လို့.. ထူးတော့ထူးခြားနေပါလား.. တခုခုတော့တခုခုပဲ.."
မိခင်ဒေါ်ဝေဝေ ရောက်ရက်ခက်နေသူ သမီးနွေနှင်းကိုကြည့်ကာ ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်သည်..
"အား.. နောက်ကျနေပြီ.. အမြန်လုပ်မှ" ခေါင်းကိုစည်းကာညှပ်ကလစ်ဖြင့်ညှပ်ရင်း နာရီကို မော့ကြည့်၍ ကဗျာကရာဖြင့်သူမ သင်တန်းသွားရန်ဟန်ပြင်လိုက်သည်..
"ဟဲ့.. ဟဲ့ ဒါကဘယ်လိုပုံဖြစ်နေတာလဲ.. လုံချည်နဲ့.. ခေါင်းကလဲ ဆံပင်ကြီးတင်ပြီးတော့.. လူကြီးပုံဆန်ကြီး.. ပြဿနာတော့ရှာမလာနဲ့နော်"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ခုတော့သွားတော့မယ်နော်... မွ.. မွ.." ပြောပြောဆိုဆို နွေနှင်းအိမ်မှထွက်လာပြီး သင်တန်းရှိရာ ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်းသို့ ဦးတည်လိုက်သည်..
သူမသည် အစအနောက်အလွန်သန်သည်.. တခါတလေ အတည်ပေါက်နဲ့စတတ်သည်.. စကားအလွန်များသည်.. တစက်ကလေးမှ ငြိမ်ငြိမ်မနေတတ်.. သူမကိုကြည့်လျှင်အမြဲပေါ့ပါးလွတ်လပ်နေတတ်သည်.. ခေတ်နဲ့အညီ ဝတ်စားတတ်သည်.. သူငယ်ချင်းများက သူမကိုခင်မင်ကြသလို.. ဆရာ ဆရာမများကလဲ ချစ်ခင်ကြသည်.. ယခုလဲ သူမ မထင်မှတ်ပဲစထားမိသော ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း သူမ ဝတ်လေ့မရှိသောထမိန်ကိုဝတ်.. ဆံပင်ကိုလှန်တင်ကာ ရိုးရိုးအေးအေးမမကြီးပုံဖမ်းကာ ထွက်ရတော့မည်ဖြစ်သည်.. မနေ့က မထင်မှတ်ပဲ စရန်စက်ကွင်းထဲဝင်လာသော ရဲသွေး အဖြစ်ကိုတွေးကာ နွေနှင်းရီချင်နေမိသည်..
------------------------- ။ ----------------------------
ရဲသွေးနှင့် စတင်သိသောနေ့ကိုမှတ်မှတ်ရရရှိသေးသည်... Y.E.S speaking သင်တန်းကို Intermediate class ထိပြီးဆုံးအောင်တတ်ထားပြီးသော်လည်း.. ဆရာမနှင့်ခင်မင်သောကြောင့်တစ်ကြောင်း နွေနှင်းရှိလျှင် အတန်းထဲ၌ speaking သင်တန်းလာပြီး စကားမပြောရဲသောသူများကိုပင်ပြောအောင်.. အတန်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှလဲ ကူညီရာရောက်နေသောကြောင့် ဆရာမက အလကားတတ်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်.. Y.E.S speaking သင်တန်း၏ သင်ကြားမှုများတွင်.. အတန်းတွင်းရှိ လူငယ်များအချင်းချင်း တစ်တွဲချင်းနေရာချပေးကာ ဆရာမချပေးသော topic ကိုအစချီကာ အင်္ဂလိပ်လို ပြောရလေ့ရှိသည်.. နွေနှင်းအတွက်ကတော့ ပြောရင်းအရှိန်ကောင်းလျှင် တခြားအကြောင်းများပင်ရောက်သွားတတ်သည်..
ထိုနေ့က ရဲသွေးနှင့်ပထမဦးဆုံးစကားပြောရသောနေ့ဖြစ်သည်.. သူ့ပုံစံက မြန်မာဆန်ဆန် ပုဆိုးနှင့် မျက်မှန်နှင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး ခင်မင်စရာကောင်းသော လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်.. စကားပြောရင်း သူ့အိမ်နားမှ ကုလားပလီက ညနေဆိုလျှင် အရမ်းဆူကြောင်း.. သူနားညီးကြောင်းများကို ရောက်သွားသည်..
ထိုအချိန်တွင် ဆရာမ အနားရောက်လာကာ သူ့ကိုစသွားသည်.. "သား.. လူအကြောင်းမသိဘဲ ဘာသာရေးမဆွေးနွေးရဘူး.. နွေနှင်းကမွတ်စလင်.. "
ဆရာမကပြောပြီး ကျမကို မျက်စိမှိတ်ပြသွားသည်.. ကျမလဲ မှင်သေသေဖြင့်..
"ရပါတယ်.. ကိစ္စမရှိပါဘူး.. ငါနားလည်ပေးလို့ရပါတယ်.." .. ရဲသွေးတော်တော်အားနာသွားပုံရသည်... ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်ကာ..
"ဆော်တီးနော်.. ငါကဒီလိုပဲပြောတာပါ.. မကောင်းဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူး.. နင်က မွတ်စလင်နဲ့မတူဘူးနော်.. တရုတ်နဲ့တောင်ခပ်ဆင်ဆင်တူသေးတယ်.. "
" ငါက ပန်းသေး.. ငါ့အဖေက ပလီလူကြီး မုဆိတ်ကြီးနဲ့.. ငါ့အမေက တရုတ်စစ်စစ်.. ..." ကျမတို့ အင်္ဂလိပ်လို ထိုတော့ပစ်ကို ဆက်ပြောသည်.. ကျမဖြီးဖျန်းရင်း သူ့ကို အကဲခတ်မိနေသည်.. စိတ်ထဲကလဲ ကိုယ်ပြောသမျှကို ပြန်ရီချင်နေမိသည်.. အချိန်ပြည့်၍ ဆရာမက သင်ချိန်ရောက်ရာတွင်.. ဆရာမကအတန်းတွင်း စောစောက လိုက်ကြည့်ထားသမျှ ဘယ်သူကတော့ဘာလိုတယ်.. conversation ဆိုတာဘယ်လိုစရတယ်.. ပေးတဲ့ topic မှမဟုတ် speaking သင်တန်းတတ်လျှင် ကြိုက်တာပြော.. အင်္ဂလိပ်လို သာကြိုးစားပြော.. ကိုယ့်အကြောင်းတွေ သူများသိမှာစိုး၍ ပြောမထွက်လျှင် story making လုပ်၍ပြောသင့်ကြောင်း ... ကျမကို ဥပမာပေး၍ ပြောလိုက်သည်..
"ဥပမာဆိုရင်ပေါ့.. နွေနှင်းလို.. သူမွတ်စလင်မဟုတ်ပေမဲ့.. story making လုပ်ပြီး သူပြောတယ်.. ပြောစရာတွေ အများကြီးထွက်လာတယ်.. အဓိကက ဘာပြောပြော အင်္ဂလိပ်လို များများပြောဖို့ပဲ မဟုတ်ဘူးလား.. " ဆရာမစကားအဆုံးတွင် ရဲသွေး မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး ကျမဘက်လှည့်ကြည့်သည်.. ကျမလဲ သူ့ကို သွားဖြီးပြီး ပုခုံးတွန့်ပြလိုက်သည်.. ဤသို့ဖြင့် ရဲသွေးဖြင့်ရင်းနှီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်..
စစသိချင်းနေ့ကတည်းက ထိုသို့ခံခဲ့ရသည်ကိုပင် မမှတ်သေး.. နွေနှင်းသူများကို နောက်ရန်ကြံစည်နေသော စက်ကွင်းထဲသို့ ရဲသွေး နောက်တစ်ကြိမ် စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက် ထပ်ဝင်လာပြန်သည်..
မနေ့က ဒါလီ့ကို နောက်၍ နွေနှင်းပြောနေသော စကားကို ရဲသွေး နားစွန်နားဖျားကြားကာ ဝင်ပြော၍ သူ့ကိုမနောက်ချင်သော်လည်း ယုတ်တိတန်အောင် သူ့ကိုပါ ဆက်ရွှီးခဲ့ရသည်..
"ဟဲ့... ဒါလီ မနက်ဖြန် ငါ့အမွှာ အစ်မလာမှာ နင်ငါ မှတ်ပြီးခေါ်လို့ ဟိုကပြန်မထူးရင် ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးမှာစိုးလို့်.. အဲဒါနင့်ကို ခင်လို့ကြိုပြောထားတာ.."
ဘေးမှရဲသွေးက "ဟုတ်လား.. ငါ့လဲပြောလေဟာ.. တော်ကြာငါက နင်မှတ်ပြီးသွားခေါ်မှ ပါးရိုက်ခံနေရအုံးမယ်.. တော်သေးတာပေါ့ ခုနင်ပြောတာကြားလိုက်လို့..."
တကယ်နောက်ချင်သော ဒါလီက ယုံဟန်မရှိ.. ဘေးကသူက ဇွတ်ယုံနေသည်.. သူ့ ကိုအကြောင်းမကြားသောကြောင့် စိတ်ဆိုးမည့်ပုံပင်ပေါက်နေသည်.. ထိုသို့ဖြင့် ကျမလဲ ယုံသော သူ့ကိုဆက်ရွှီးခဲ့သည်..
"အေး.. ဒီလိုရှိတယ်ဟ.. သူနဲ့ငါက ဒီသင်တန်းကို ၁ယောက်စာပဲပေးပြီး ငါ့နာမည်နဲ့ပဲ register လုပ်ပြီး ၂ယောက်တက်နေတာ.. ဘယ်သူမှမသိဘူး.. သူက ငါ့အယောင်ဆောင်ပြီးလာတက်မှာ.. သူ့ကို ငါ့နာမည်ပဲခေါ်ကြမှာ.. သူကလဲ အလိုက်အထိုက်တော့ နေတတ်မှာပါ.. မစိုးရိမ်ပါနဲ့.. ဟော.. ပြောရင်းဆိုရင်း အတန်းတောင်ဆင်းပြီ ပြန်တော့မယ်.. မနက်ဖြန်ကျရင်တော့ သတိထားကြည့်ကြည့်လိုက်"
------------------------ ။ -----------------------------
"ဟိုကောင်မလေးခြေတစ်လှမ်း ကုဋေ၁သန်းနဲ့ လျှောက်မနေနဲ့.. နင့်အမေပိုင်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူး..!" .. ဘတ်စ်ကားပေါ်မှစပါယ်ရာ၏ ကြိမ်းမောင်းသံကြားတော့မှ နွေနှင်းအတွေးစပြတ်သွားသည်.. မြို့ထဲဟွန်းမတီးရ စည်းကမ်းချက်ထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကြားရလေ့ရှိသော ကားသမားများ၏ဆဲရေးဆူပူသံများကို ရန်ကုန်မြို့ကြီး၏လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်ခံယူထားသော နွေနှင်း ကားသမားကိုလဲ အပြစ်မဆိုလိုတော့ပါ.. ကြည့်လိုက်တော့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမီးပွိုင့်တောင်ရောက်နေပြီ.. မီးပွိုင့်ကလဲ ထုံးစံအတိုင်းပျက်နေသည်.. ကားများကားနိုင် လူများလူနိုင်စနစ်ဖြင့် ကားတစ်ပြန်လူတစ်လှည့် ကူးလူးဖြတ်သန်းနေကြသည်.. လမ်းဘေးဈေးသည်များပလတ်ဖောင်းပေါ်တွင်အပြည့် ...ကားလမ်းပေါ်၌လဲ ပန်းဆိုးတမ်း ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို တန်းစီနေသော ဘတ်စ်ကားများ.. နွေနှင်းအတွက်တော့ ဒီလမ်း ဒီလူ ဒီအခြေအနေသည် မထူးစမ်းတော့.. ၁ပတ် ၄ရက် လျှောက်နေကျလမ်းဖြစ်သည်..
ပန်းဆိုးတန်း လမ်း၎ဝကျော်ပြီး အနဲငယ်လျှောက်ပြီးလို့ ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်းထဲ ချိုးဝင်လိုက်ချိန်တွင် ရှေ့နား၌ လမ်းလျှောက်နေသော ရဲသွေးကို လှမ်းမြင်နေရသည်.. နွေနှင်း ခတ်သုပ်သုပ်လျှောက်၍ ရဲသွေးကို ကျော်တက်လိုက်သည်.. ရဲသွေး သူမကိုမြင်သော်လည်း နှုတ်မဆက်... ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လျှောက်နေသည်....
"ဒီကောင်.. မနေ့ကပြောတာကို တကယ်ယုံတယ်ကြည့်စမ်း.. ဒါဆိုရင်တော့ မထူးဘူး.. မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆက်လျှောက်သွားမှ.. အတန်းထဲရောက်မှ သူ့ကိုပြောပြပြီး ရီရမယ်... "
အခန်းတွင်းသို့ဝင်ထိုင်နေလိုက်သည်.. ဒါလီ အနားသို့ရောက်လာပြီး.. "ဒါလား.. နင့်အစ်မ နင့်အမေ ဆိုရင်တောင် ယုံအုံးမယ်.. ဝတ်လာတာကိုက... "
ဒါလီက ဆက်ပြောသည်.. "အေးပါ... နင်ဘယ်လောက် ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှာမို့လဲ... မကြာခင်နင့်ပုံစံကပေါ်လာမှာပဲ.. " .. ဟုတ်ပါသည်.. တသက်နှင့်တကိုယ် စကားမပြော မလှုပ်တလှုပ် ငြိမ်ငြိမ် နွေနှင်း ၅မိနစ်ပြည့်အောင်မနေနိုင်ခဲ့ပါ.. ရယ်စရာတွေပြော.. အားရပါးရရယ်ကာ ငြိမ်နေသူများကိုပင်လိုက်လိုက်စတတ်သော နွေနှင်း .. သူမကိုယ်တိုင်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိပါ..
"ထားလိုက်ပါ.. ရသလောက်တော့နောက်လိုက်အုံးမယ်.. ဒီနေ့ညနေ ပေါ်တော့လဲ နောက်တာဆိုပျော်စရာကြီး.. ဟိုကောင့်မျက်နှာကြီးဘယ်လိုလဲ ကြည့်ချင်စမ်းပါဘိ..."
ခဏကြာအတန်းစတော့ ဆရာမက စကားပြောရန် partner ခွဲပေးရာ.. နွေနှင်း ၏အဖော်မှာ.. နွေနှင်းတို့ ဆယ်တန်းအောင်နှစ်၌ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ၇ ရ ကျောင်းသားနှင့်ဖြစ်သည်.. ထိုသူက အင်္ဂလိပ်ကို အတော်ပင်မွတ်နေအောင်ပြောတတ်သည်.. ဆရာမလစ်တုန်း နဲနဲလေးတောင် အချောင်ခိုပြီး မြန်မာလိုပြော၍မရ.. သူမြန်မာလိုမတတ် US army ကလာသည်ဟုပြန်ပြောသည်.. အရင်ကမပြောသောသူများ မတတ်သောသူများကို နွေနှင်း ဆရာကြီးလုပ်ပြီးနင်းကန် မှုတ်ခဲ့သမျှ ခုပြန်မှုတ်ခံနေရပြီ.. ထိုသူရှေ့တွင် တတ်ထားသမျှ အင်္ဂလိပ်စာလေးများ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်...... ပြောလိုက်လို့မှားသွားမှာကိုလဲစိုးရိမ်သည်.. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိတော့သော နွေနှင်း စိတ်ဓာတ်ကျကာ ငုတ်တုတ်မှိုင်နေမိသည်.. ထိုနေ့က သူများတွေသာ partner change ရသည် နွေနှင်း ကတော့ ထိုသူနဲ့ ၂ပါးသွားနေရတဲ့ ပြဿဒါးနေ့ဖြစ်သည်.. ဆရာမကလဲ နွေနှင်းကိုတိုးတက်စေချင်၍ တစ်ကြောင်း.. ၁တန်းလုံးတွင် နွေနှင်းမှလွဲ၍ သူ့အတွက်စကားပြောရန်မှာ ဆရာမပဲရှိသည် ဆိုသည်ကိုလဲနားလည်သည်.. နွေနှင်းတစ်ယောက် ငြိမ်ကာမှိုင်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေရ၍ အဝေးမှ နွေနှင်းကို အကဲခတ်နေသော ရဲသွေးကိုပင် သတိမထားမိတော့ပါ...
Posted by mabaydar at 6:45 PM4comments :
မြန်မာဖောင့် လက်ကွက်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မရိုက်တတ်လို့ စိတ်ပျက်နေလား....
ဟောဒီ site လေးမှာ သင် burglish တတ်ယုံနဲ့ မြန်မာစာလုံးလေးတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ရိုက်ယူလို့ရပြီလေ...
အိုင်ဒီယာနဲ့ ကြိုးစားမှုကို လေးစားပါတယ်...
ဥပမာ... စာရိုက်တဲ့ box လေးထဲမှာ "မြန်မာ" လို့ရိုက်ချင်ရင်.. အောက်ပါပုံလေးတွေအတိုင်း အဆင့်လိုက် ရိုက်သွားရုံပါပဲ..
စမ်းကြည့်ကြပါ.. ကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်.. မြန်မာ ဖောင့်မရှိသူများ.. မြန်မာလို ရိုက်ရမှာပျင်နေသူများ.. အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
မဗေဒါ ရဲ့ ပိုစ့်လေးတွေကို မြန်မာလို comment ပေးချင်ရက်နဲ့ မြန်မာလိုမရိုက်တတ်လို့ မပေးခဲ့ရဘူး သူငယ်ချင်းရယ်ဆိုတဲ့ ဗေဒါ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လဲ..
Credit goes to the guys who put efforts to create this and information credit goes to Ko Han Lynn Kyaw.
Posted by mabaydar at 10:10 PM2comments :
၂၉ရက် ဧပြီတွင် ကြေငြာသော မိုးလေ၀သကြေငြာချက်ဖြစ်သည်... ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး.. ပြောရတာလဲ.. ကျွဲပါးစောင်းတီးပဲဖြစ်တော့မယ်...
Posted by mabaydar at 9:14 AM No comments :
Posted by mabaydar at 4:06 PM 1 comment :
ဧပရယ်၁ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင် မြန့်မာ့အသံက တာသင်္ကြန်အဆိုအကများကို အမြဲစောင့်စားခဲ့ရတယ်.. ငယ်ငယ်တုံးကထဲက သင်္ကြန်ဆိုရင် အိမ်အောက်မှာရေဇလုံလေးချပြီး လမ်းထဲဖြတ်လျှောက်တတ်တဲ့ လူ၁ယောက်၂ယောက်ကိုစောင့်ပတ်ခဲ့ရတယ်.. ကလေးဆိုတော့ ဒီလောက်ကစားရတာလဲပျော်လို့.. ကြီးလာတော့ ဖေဖေကလုံးဝပေးမကစားတော့ဘူး.. သင်္ကြန်ရောက်လို့ရေလေးစိုချင်လုိ့ မနက်ဈေးသွားဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မရဘူး.. သူကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ်မေမေ ၁ယောက်ပဲ သွားဝယ်ရတယ်..ဒါတောင်ဗေဒါက အိမ်မှာအငယ်ဆုံးလဲဖြစ် ၈တန်း၉တန်းထိ လမ်းထဲက ကလေးတွေနဲ့ကစားတုံးဆိုတော့ ဖေဖေက အထူးခွင့်ရေးအနေနဲ့ အိမ်အောက်ထပ်က ကလေးတွေနဲ့ တူတူကစားခွင့်ပေးခဲ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ ရေစိုလို့ပျော်ပေမဲ့ ကျမငယ်ငယ်ကလောက်မပျော်တော့ဘူး.. ကျမအစ်မတွေဆိုရင် သင်္ကြန်ဆို အိမ်မှာပျင်းလွန်းတာရော ဖေဖေက သမီးတွေကိုသဝင်တိုလို့ တခုခုဆိုဆူပဲခံနေရလို့ အားလုံးတရားစခန်းဝင်ကြတယ်.. ကျမကတော့ အိမ်မှာပဲတရုတ်ကားဇာတ်လမ်းတွဲတွေ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်တထပ်ကြီးငှားပြီး သင်္ကြန်တတွင်းလုံးထိုင်ကြည့်ခဲ့တယ်.. ဖေဖေနဲ့ကျမ၂ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရင်တော့ ဖေဖေကသိပ်မကြတ်ဘူး.. မနက်ဆိုမုန့်တူတူထွက်စားတယ်.. ကျမကသင်္ကြန်တွင်းအပြင်ထွက်နဲတော့ လမ်းထဲကအကြောင်းသိ ယောက်ျားလေးတွေက ရတုံးဖေဖေဘေးမှာပါတာတောင် ရေဗုံးနဲ့လိုက်လောင်းလို့မပြီးရင် အိမ်ပြန်ရောက်ရင်နားညီးပြီမှတ်.. ပျင်းရင် မေမေနဲ့အမတွေရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပို့ပေးတယ်.. ကားပေါ်ကနေ ရန်ကုန်သင်္ကြန်ကို လမ်းတလျှောက်ကြည့်ခွင့်ရတယ်.. လမ်းတလျှောက်လဲ ဖေဖေပြောနေကျအတိုင်း
"တွေ့လားဟိုမှာ.. မူးရူးနေကြတာ.. ကားတွေက ပိတ်ပြီးရေတောင်မစိုဘူး.. မိန်းကလေးတွေအတွက်အန္တရာယ်များတယ်" စသည်ဖြင့်..
ကားများပိတ်လို့ ဘေးသင်္ကြန်ကားက အမူးသမားတွေကလှမ်းစရင် စိတ်ညစ်ရပါတယ်.. ဖေဖေက "နင်တို့ အနေထိုင်မတတ်လို့.." ဆိုပြီး တခါတလေစကားများရရင် ဘယ်မှလိုက်မပြတော့ပဲပြန်ရတတ်ပါတယ်.. အဲဒိအရွယ်တုံးကတော့ဖေဖေ ဘယ်လောက်ပြောပြော အဲဒိပျော်နေတဲ့သူတွေကိုအားကျမိတယ်..
နောက်တော့ကျမ စကာင်္ပူရောက်လာတယ်.. ၂၀၀၅ သင်္ကြန်မှာရန်ကုန်ပြန်ဖြစ်တယ်.. ရန်ကုန်မှာရော စကာင်္ပူမှာရောခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း အိမ်ကလဲစိတ်ချတဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့အမ မဏ္ဏပ်မှာ သူမရဲ့အာမခံချက်အရရော ကျမအမရဲ့ကူပြောပေးချက်အရရော နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မိဘတွေမရှိပဲတောင်နေလာရတာကြောင့်ရော အကျက်နေ့၁ရက်ထဲပတ်ပြီးရင် နောက်ထပ်မတောင်းဆိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိရောကြောင့် ရန်ကုန်အင်းလျားလမ်းသင်္ကြန်ကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးခဲ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ကျမ ငယ်ငယ်ကအားကျခဲ့သလောက် စိတ်ကူးခဲ့သလောက်ပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်.. ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုလဲ ၈၀%လောက်လက်ခံလာတယ်.. ဒီလိုနဲ့စောစောပြန်လာဖြစ်ခဲ့တယ်.. အတက်နေ့အိမ်မှာနေနေတုံး ကျမငယ်သူငယ်ချင်း (သူငယ်ချင်းများအကြောင်းမှ SNOW) ကရေပတ်ခံထွက်ဖို့ခေါ်ပါတယ်.. ဖေဖေ့ကိုကတိပေးပြီးဖြစ်နေလို့ ကြောက်ပေမဲ့ SNOW က ကျမ အိမ်ကစိတ်ချရလောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် မတွေ့ရတာ ၁နှစ်ကျော်ရှိနေတော့ မေမေကူပြောပေးလို့ လိုက်ခွင့်ရခဲ့တယ်.. ကားကချောင်နေပြီး မိန်းကလေး ၄ယောက် ယောင်္ကျားလေး၂ယောက်ထဲမို့ ညနေပိုင်း ကျမအစ်မတွေကိုပါ ခေါ်ဖြစ်ခဲ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ မဏ္ဏပ်စီတော့လဲကြာ.. ခွက်စုတ်ကနာ.. မိန်းကလေးဆို မီးသတ်ပိုက်က ဆွဲ.. အမူးသမားက မဲ.. ရေလေးနဲနဲစိုလိုက် နောက်ထပ်ဆိုဖို့ တော်တော်လေးစောင့်လိုက်နဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့သွားရတာကလွဲလို့ သတိထားပြီးကြောက်နေရတာကများပါတယ်..
၂၀၀၇ သင်္ကြန်မှာ ချစ်သူအားကိုးနဲ့ တူတူပျော်မယ်ဆိုပြီးပြန်ခဲ့ပေမဲ့ ခြိမ်းတဲ့နေရာကိုရောက်မလာပဲ သင်္ကြန်တွင်း ကျမအိပ်မက်တွေဆိုးခဲ့ရပါတယ်.. ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျမငယ်ငယ်ကနေ ၂၀၀၇ထိ သင်္ကြန်အတွေ့အကြုံပါ..
ဒီနှစ်တော့ ကျမစင်္ကာပူမှာပဲ အလုပ်ကသူငယ်ချင်းအဒေါ် စတုဒီသာအတွက် SAMBAWAN ဘုန်းကြီးကျောင်းသင်္ကြန်မနက်ပိုင်းသွားပါတယ်.. သူငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီး မြန်မာအင်္ကျီဝတ်သွားပါတယ်.. လာတဲ့လူတွေအားလုံး သရုပ်ပျက်မရှိပါဘူး.. စတုဒီသာကိုလဲ အေးအေးလူလူစားကြပါတယ်.. မိန်းကလေးကိုရေပတ်ချင်တဲ့သူကလဲ "ရေပတ်ပါရစေ ခင်ဗျာ"ဆိုပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလောင်းပါတယ်.. ၂၀၀၆ သင်္ကြန်တုံးကတော့ တိုပါရိုး နဲ့ CITY HALL သင်္ကြန်ကိုမေမေရယ် အစ်မတွေရယ်နဲ့ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း သရုပ်ပျက်မရှိပါဘူး.. အမူးသမားမရှိဘူးလို့မပြောပါဘူး.. CITY HALL မှာ တော့လူပိုများပြီး အမူးသမားလဲရှိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့သူက ဆိုးတဲ့သူထက်ပိုများနေတော့ အားလုံး ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်ပါပဲ.. လူငယ်သဘော စကြနောက်ကြတာကိုလဲ လက်ခံလို့ရပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထိမ်းတဲ့ သင်္ကြန်လေးကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ခံစားခဲ့ရတယ်.. ကျမကျောင်း TP သင်္ကြန်ဆိုလဲ PERFORMENCE ပိုင်းမှာ ယဉ်ကျေးမှု မပျောက်အောင်ရော ခေတ်နဲ့အမှီဟာသလေးတွေရောနဲ့ တခြားနိုင်ငံကလူတွေရှေ့မှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းခဲ့တယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမအတွက်သင်္ကြန်ဆိုတာကတော့ မြန်မာပြည်က မြေသင်းရနံ့လေးတွေ.. အတာမြေအိုးလေးတွေ.. ပိတောက်ပန်းရနံ့လှိုင်လှိုင်တွေ.. TV မှာလာတဲ့ "သင်္ကြန်မိုး"ရုပ်ရှင်.. နေရာတိုင်းကြားရတဲ့ တူးပို့တူးပို့ စီးချက်လေးတွေ ပါမှပြီးပြည့်စုံသွားမှာပါ ..
Posted by mabaydar at 4:56 PM 1 comment :